Ciidamada nabadsugida Soomaaliya oo ku fashiliyay Muqdisho weerar gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada nabadsugida Soomaaliya oo ku fashiliyay Muqdisho weerar gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay
July 14, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Ciidamada nabadsugida Soomaaliya ee NISA. Sawirka: gettyimages.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada haayada nabadsugida Soomaaliya ee NISA ayaa sheegay in ay fashiliyeen weerar gaari qarax laga soo buuxshay ayna qabteen qofkii rabay inuu isku biimeeyo huteel ku yaala caasimada Soomaaliya, Muqdisho, sida uu sheegay sarkaal.
Afhayeenka dowlada hoose ee Muqdisho, Cabdifataax Cumar Xalane oo la hadlay wakaalada wararka Sonna ayaa sheegay in qofkii isqarxin lahaa uu hadda ku jiro gacanta ciidamada NISA su’aalana la weydiinayo.
“NISA waxay qabteen gaari laga soo buuxshay aalado qarxa iyo qof al-Shabaab ah kaasoo rabay inuu weerar ku qaado huteelka Maka al-mukarama ee Muqdisho” ayuu yiri afhayeenka, waxaa halkaas ka jiray kulan u dhaxeeyay isimo iyo siyaasiyiin, NISA ayaa baaraysa kiiska, ayuu ku daray.
Kani waa weerarkii labaad oo qarax gaari laga soo buuxshay oo ay NISA fashiliso 24-saac gudahood. Shalay ayay ahayd markii ciidamada NISA ay ku fashiliyeen gaari kale oo walxaha qarxa laga buuxshay kaasoo ay ciidamada ku qabteen deegaanka Ceelasha Biyaha oo ku yaala daafaha Muqdisho.